‘’Tsy maintsy arahi-maso mandritra ny 14 hatramin’ny 21 andro ireto olona ireto. Raha feno ny fepetra efatra izay manambara ny fisian’ilay valan’aretina Coronavirus, vao azo lazaina fa voa izy ireo’’, hoy ny fanazavana voaray tamina dokotera iray nanontaniana . Hatreto moa dia tsy mbola misy olona ahiana ho misy ity valan’aretina ity eto amintsika. Namoaka fanambarana avy hatrany omaly hariva ny ministeran’ny fahasalamam-bahoaka fa tsy marina io vaovao io, ary tsy mbola nahitana trangan’aretina momba io otrikaretina io eto Madagasikara, hatramin’izao aloha.Iza no milaza ny marina ? Inona no tena nitranga marina teny amin’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato ? Tsy mety miteny ireo tompon’andraikitra nanontaniana, fa inona no antony ? Efa namoaka io fanambarana io aloha ny ministeran’ny fahasalamam-bahoaka, dia izay izany fa manaraka akaiky ity raharaha ity ny mpanao gazety.Tsara homarihina fa ny olona misy tazo ka manana maripana mihoatra ny 38° C, na mety mivalana na koa hoe manavy, marary an-doha, reraka, mangovitra, tsembo-dava, mangorangorana ary tsy avy miaina, no ambara fa tratry ny Coronavirus. Anisan’ny torolalana hisorohana ny coronavirus ny fanasana tanana matetika, ny fampiasana mosoara fanary, mikohaka amin’ny kiho ary tsy mifandray amin’ny efa voany. Efa nisy olona tratran’izy ity tatsy amin’ny Nosy Maorisy ny herinandro lasa teo, ary maro no efa nisahotaka satria hoe akaiky an’i Madagasikara io nosy io ary maro ny fifamezivezena sy fifanakalozana, tahaka ny misy ihany eo amin’i Madagasikara sy i Chine.